Myanmar Gays Heaven: KM ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲလေးပါ
Posted by Myanmar Gays Heaven at 9:09 AM
mryan yan June 1, 2014 at 12:40 AM
ခံချင်​ရင်​ Mail ချန်​ထားလိုက်​ မန်း​လေးက ဆိုစိတ်​ဝင်​စားတယ်​ လီး၆လက်​မနီးပါးရှိတယ်​။ဝရင်​​တော့မကြိုက်​ဘူး ကိုထက်​(MDY)
ခံချင်တယ် ခုမန်းလေးမှာ myintaungzan102@gmail.com
myat thu June 12, 2014 at 3:02 AM
adinoo20 @gmail.com ပါ တွေ့ချင်ပါတယ်
m2boylay@gmail.com August 3, 2014 at 12:38 PM
Ko htetေ၇ kotoe437@gmail.com က်ိုအပ်​​ပေးပါ ​တွေချင်​တယ်​ မန်း​လေးကပါ
ခံ ချင်တဲ့ သူ
ခံချင်​တယ်​ ဖုန်းnoေ​လေ viber နဲ့ ​ပြောမယ်​ mdy ကဘဲ
09256520069 mdy အပြန်အလှန်လိုးချင်တယ်
Dragon Soe February 1, 2015 at 2:15 AM
kaung lay February 24, 2015 at 10:17 AM
Mandalay ကဆို ဒီ boy ​လေးရမ်းမိုက်​တယ်​ပစ္စည်းလည်း လန်းတယ်​
ph no က 09259229231 တဲ့
chit thu March 16, 2015 at 8:54 AM
စုတ်ချင်တယ် lastlonglate@gmail.com ကိုအက်ပါ
Zin Kowin July 20, 2014 at 2:52 AM
တုတ်ကြီး July 23, 2014 at 6:26 PM
Wai Yan July 3, 2014 at 10:13 AM
km ရဲ လီးကြီးကို ပါစပ်​နဲ့ပြီး​အောင်​စုပ်​​ပေးချင်​တယ်​.burninglove@gmail.com ကို ​မေးပို့​ပေးပါ
Su Yi July 7, 2014 at 12:23 AM
ခံချင် တယ်ဗျာsuyi.girllay@gmail.comပါ မ ကွေးကပါ ပုံပိုးပေးပါ
စုပ်​​ပေးချင်​တယ်ဆိုရင် greatsky2014@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပေးနော်....
Anonymous July 26, 2014 at 11:43 PM
greatsky2014 ကိုဆက်​သွယ်​လို့မရပါ ယူကဘဲ cakecremx@gmakl.comကို ဆက်​သွယ်​​ပေးပါ ယူ့လီးကြီးကို စုပ်​ချင်​လှပြီ
Anonymous August 27, 2014 at 12:14 AM
shing ran September 27, 2014 at 11:22 AM
ပူစိ​တေး​တေး​ရေး ပုစိ​တေး​တေး​ရေး November 16, 2014 at 11:23 AM
ygn က sawthetoo@gmail.com
Photoပိုင်​ရှင်​ or photo ပိုင်​ရှင်​လို လီးကြီးမျိုး နဲ့ ဖင်​လိုးခံချင်​လိုက်​တာ
shing ran August 27, 2014 at 1:39 AM
mkn bal ka lal bro ?
sweetlover August 11, 2014 at 3:43 AM
ခံချင်တယ် မှုတ်ပေးပါမယ် MDYကပါပဲ
ချစ် တတ်တဲ့ bottom
တ ယောက် လို ချင် ပါတယ်
ချစ် ချင် တဲ့ လူ ဆက်သွယ်ပါ
ဘွဲ့ ရ တဲ့လူ ဖြစ် ရမည်
၀၉ ၂၅၀ ၇၅၈ ၆၀၈
နေ ရာ ရှိတဲ့ သု ဆို ဦး စားပေးမည်
kk October 6, 2014 at 8:50 PM
hi par ယူကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်
ခံချင်တယ် viber နဲ့ပြောချင်တယ်
Yome. Laymha August 16, 2014 at 1:37 PM
Kaung Ka Lay April 5, 2015 at 3:50 AM
Anonymous August 17, 2014 at 4:01 AM
id c29767485 gochatနဲ့အရင်ပြောပါမယ်
Anonymous August 26, 2014 at 9:54 PM
လားရှိူးကအလိုးခံချင်​တဲ့သူ ရှိလား ဖုန်းနံပါတ်​ထားခဲ့ပါ လိုးရန်​​နေရာရှိရမည်​ မ၀ရ အသက်​မကြီးရ အပြုအစု​ကောင်းရမည်​ ကျွန်​​တော့်​လီးက​တော့ စိတ်​တိုင်းကျဖြစ်​​စေရမည်​
Anonymous September 19, 2014 at 1:26 AM
gmail acc ထားခဲ့လေ ဆက်သွယ်လိုက်မယ် မ၀ပါ အသက်လည်းမကြီးဘူး ဆယ်ကျော်သက်လေးပါ
at lasho shwe kanenare hotel , for3days from 27th of august. looking foratop boy.
မန်း​လေးကိုလာခဲ​လေ စိတ်​တိုင်းကျဖြစ်​​စေရပါမယ်​ အားအားလုံးအဆင်​သင့်ဘဲ​ ယူလာနိုင်​မယ်​ဆိုရင်​
biguyasian ​ရေ ဖုန်းno ​လေး​ပေးပါ
biguyasian@gmail.com ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရင်ပါ တယ်၊
Anonymous August 31, 2014 at 12:32 PM
ဖင်​လိုးခံချင်​ပါတယ်​ လီးလည်းစုပ်​ချင်​လို့ပါ ပြည်​ကဆိုရင်​ ph ထားခဲ့ပါ
Anonymous September 13, 2014 at 7:15 AM
Anonymous October 30, 2014 at 3:05 PM
ညီလည်းပြည်ကပါ09253638143 ပါ အသက်၁၆ပါ
chit thu March 16, 2015 at 9:04 AM
chit thu March 16, 2015 at 8:47 PM
chit thu March 16, 2015 at 10:03 PM
ko Aung September 2, 2014 at 3:01 AM
မန်းလေးကပါ ၃၂နှစ်ပါ man to man စိတ်ဝင်စားပီး အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ချင်ရင် စာ သို့ ph ပေးခဲ့ပါ
09402556578 call me
Anonymous September 5, 2014 at 2:52 PM
ပခုက္ကူက ဖင်​ခံ လီးစုပ်​ချင်​သူများ ဖုန်းထားခဲ့ပါ
mg myo win December 24, 2014 at 6:35 AM
ပခုက္ကူ ကပါ အပြန်​အလှန်​လိုးချင်​တယ်​
Anonymous January 29, 2015 at 1:56 PM
ကိုင်ချင်တယ်။စုပ်ချင်တယ်။ဒီလာက်ပဲ။ သေချာပြုစုပေးမယ် ။အသက်၂၀ကျော် ကိုကြီးတွေ ကို အလိုရှိသည်။ 250049945
250049945ကို ရုတ်တရက် ရောင်းလိုက်သောကြောင့် အောက်တိုဘာ လ နောက်ပိုင်းတွင် အခြားသူ လက်ထဲရောက်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့်။
ဖင်​လိုးချင်​သည်​ မန်း​လေးကပါ 09259028778viberမှာနှင်းဆီပန်းနှင့်​sexဆိုပီးဆက်​သွယ်​ပါ လီးစုပ်​​ပေးချင်​သူများသာ
Anonymous January 31, 2015 at 8:16 AM
ငါကဘာကိုလိမ်ခဲ့လို့လဲ ချစားတယ်ပြောရအောင်မင်းပိုက်ဆံ၁ကျပ်လောက်များငါချူစားသွားတာရှိလားဒီမှာညီလေးအကိုကလူရွေးပြီးကို့စရိတ်နဲ့ကိုလိုးတာကြိုက်မှလဲလိုးတယ်ငါမင်းကိုလိမ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်လိုးပေးမယ်ပြောပြီးလူပုံကိုမကြိုက်လို့မလိုးလိုက်တာပဲရှိမယ်သူများထိခိုက်အောင်ဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူး 09425301542 Top
09425280597 ရန်ကုန်ကပါ လီးကြီးရင်ခံချင်ပါတယ်
လိုးချင်တဲ့သူ viber ကနေလီးပုံအရင်ပြပါ ကြီုက်ရင် စရိတ်ငြိမ်းတလ 100000 ပေးမယ်
09402556578 ygn,mdy top
Wunna PhoneAung October 25, 2014 at 3:50 AM
Prince Shine October 16, 2014 at 1:51 AM
ဆက်​သွယ်​ပါ စိတ်​ကြိုက်​ ပြုစုမယ်​ ၀၉၂၅၆၅၂၅၉၄၁
Anonymous October 23, 2014 at 5:52 AM
Peter König October 26, 2014 at 8:58 PM
wow...Penis mmm...,email: p.Koenig116@gmail.com
Yangon, white virgin bottom. william.blake41@yahoo.com
bot ပါmdy က ဖင်လိုးချင်ရင်အပ်လိုက်ပါနေရာရှိရင်လာအလိုးခံပါမယ်age38ပါစိတ်ဝင်စားရင်ဆက်သွယ်ပါkokyikokk@gmail.com
နှစ်ကူးမောင် November 11, 2014 at 4:15 AM
Anonymous November 11, 2014 at 4:15 AM
ကျောက်မြောင်းကပါ ချစ်သူ သူငယ်ချင်းလေး လိုချင်တယ်
Anonymous February 22, 2015 at 1:03 AM
sms me to 09799650309 . i desire like you.
kyaw myat November 14, 2014 at 8:10 AM
Anonymous November 23, 2014 at 5:30 AM
Anonymous November 23, 2014 at 5:33 AM
naymin soe November 27, 2014 at 9:21 PM
မြန်မာတော့ မဖြစ်နိူင်ဘူး နီဂတိုးတုတ်တွေဘဲ အဲတာ... စားဖူးနေကြမို့လို့ သိတာပါ...
Anonymous December 5, 2014 at 12:58 AM
on line ကဘဲ feel ဖြစ်အောင် Chat ချင်ပါတယ်.
on line vzo ဖြစ်ဖြစ် skype ဖြစ်ဖြစ် chat ချင်ပါတယ် ၂ ယောက်လုံးfeel လာအောင်ပေါ့ homo များ add ပေးကြပါ
အပြင်မှာမတွေ့ချင်ဘူးလား ph.no ထားခဲ့ viber တွေ့မယ်
Nino Miko December 21, 2014 at 11:23 PM
blackcoffee December 11, 2014 at 7:05 AM
ရန်ကုန်ကပါပိုက်ဆံပေးရင်အကုန်လိုးပါတယ်မများပါဘူး5000 10000 ပေါ့ဗျာဒါကလည်လိုးပေးပြီးရင်အားပြန် ဖြည့်ဖို့ပါ နေရာရှိရင်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ 09972150988 09796441066
blackcoffee December 11, 2014 at 7:09 AM
blackcoffee အသက်​ဘယ်​​လောက်​ရှိပြီလဲ သိချင်​ပါတယ်​ ၊ မိန်းမမဆန်​ပါဘူး ၊ ​ယောင်္ကျားစစ်​စစ်​ပါ ၊ တစ်​ခါမှ မခံဘူး အ​တွေ့အကြုံမရှိတဲ့ ပါကင်​ပါ ၊ စမ်းကြည့်​ချင်​တယ်​ လူသိမခံချင်​ပါ ။
09444023358 viber ka nay contact loat pr.
Anonymous December 14, 2014 at 8:08 PM
Anonymous December 15, 2014 at 3:10 AM
Call me nowခု၇န်ကုန်မှာ၀၉၉၇၁၆၇၅ဂ၆
soe moeaung475 December 17, 2014 at 10:05 AM
ခံချင်ရင် smoeaung475@gmail.comကိုအပ်လိုက် ဖင်တခါမှမလိူးဖူးဘူးလို့ လိုးချင်တာ နေတာကပြင်ဦးလွင်
I like this photo and send me gmail, 1hnaryuu@gmail.com, ygn only
Anonymous December 21, 2014 at 1:25 AM
hotti boy December 23, 2014 at 10:31 PM
လိုး​ပေး ၀၉၉၇၉၈၆၁၉၃၇ massage ပို့လိုက်​
royallover22 December 28, 2014 at 6:57 AM
royallover22 December 28, 2014 at 7:07 AM
royallover22 December 28, 2014 at 8:01 AM
thuyamin December 30, 2014 at 5:14 PM
thuyamin December 30, 2014 at 5:15 PM
Iron Dragon January 1, 2015 at 12:30 PM
ခံချင်သည် နှစ်သစ်ကူ မို့ တကယ်တွုပြီး တကယ် လိူးမည့်ရန်ကုန်က topများလိုချင်သည်
0936073294ဆက်သွယ်ပါလှည်းတန်း က ဆိုပိုအ ဆင်ေုပ မည် ချစ်သူ အ နေနဲ့တွဲချင်သူများ ကျနော်က girlish မ ဟုတ် ဘူး
Iron Dragon January 1, 2015 at 12:31 PM
stone2011 January 2, 2015 at 12:58 AM
ဓာတ်​ပုံထဲက ဟာကိုစိတ်​၀င်​စားတယ်​ ခုက တ​ယောက်​ထဲ ​နေရတာ ​တွေ့ချင်​တယ်​ ဘယ်​လိုဆက်​သွယ်​ရမလဲ
Iron Dragon January 3, 2015 at 11:55 AM
ygn ka 0936073294 bot
royallover22 January 3, 2015 at 8:19 PM
Anonymous January 31, 2015 at 5:42 AM
i want to fuck someone from mdy .plz contact me
ဖင်​လိုးခံချင်​တယ်​ viber နဲ့ ဆက်​သွယ်​ချင်​တယ်​
ဘယ်ကလဲဗျ စမ်းလိုးဘူးချင်တယ်gmailရှိလား ဖုန်းနံပါတ်ပေးမယ်
Anonymous January 31, 2015 at 11:41 PM
Hangouts....ilikedick.ld@gmail.com ko add par.
Anonymous February 2, 2015 at 3:16 PM
အလိုးခံချင်သူများ....mymirajanez@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပါ...စိတ်ကြိုက် ဖြစ်စေရပါမယ်....အခြောက်များလဲလက်ခံပါတယ်..မနွဲ့လျင်တော့...အဆင်ပြေပါသည်...ရန်ကုန် only ပါ...
,ခံချင်​ပါတယ်​ ilikedick@gmail.comကို hangoutsမှာ add​ပေးပါ
Anonymous February 4, 2015 at 3:53 AM
မလမကတိုးတိုးတိတ်တိတ်ဖင်လိုးချင်သူများဆက်သွယ်ပါ၀၉၉၇၄၉၂၁၁၈၉ အသက်၂၈ မနွဲ့ပါ
royallover22 February 7, 2015 at 6:48 AM
ပစ္စည်းကောင်းကောင်းလေးမို့ replyမှာ phထားခဲ့ပါလျှင်သူသာအရသာသိမည်ဖြစ်
Brandi Lilly February 18, 2015 at 11:53 PM
It would be an honor to worship that beautiful cock!
KoKo Dick February 23, 2015 at 1:04 PM
Anonymous March 18, 2015 at 10:59 AM
kaung lay February 24, 2015 at 10:19 AM
09 250 890 931 ကိုဆက်ပါ top only ချောတယ်
I am looking foraboyfriend any role who can treat me well and I will treat u back well...contact to this number ..... 09420186635
ရန်ကုန်ကဖင် ခံချင်သူများဆက်သွယ်ပါ ၀၉၃၀၁၉၈၄၆၀ viber only
မန်းလေးကပါ ၃၅နှစ် man to man ဖြစ်ချင်တယ်
bright star March 20, 2015 at 3:24 PM
Anonymous March 21, 2015 at 11:19 AM
Anonymous March 22, 2015 at 7:53 AM
mdyက ၃၃နှစ် ၀၉၇၉၈၈၆၇၉၁၂ man to man messageပို့ပါ
Anonymous March 26, 2015 at 3:11 AM
mdy sexboy March 27, 2015 at 1:55 PM
king 1 March 30, 2015 at 9:25 AM
လီးက​တော့ အကြိုက်​ဖြစ်​​စေရမယ်​ ..အ​ခြောက်​ပုံ​ပေါက်​​နေရင်​မလိုးချင်​ဘူး...mdy ကပဲ...beerတကာခံ​ပေးမယ်​ လိုးချင်​တယ်​
Anonymous March 31, 2015 at 12:48 AM
ye thu April 1, 2015 at 9:23 AM
KoKo Dick April 1, 2015 at 12:40 PM
09797762050 ကို viber က ဆက်ပါ အခုနော
Anonymous April 1, 2015 at 2:52 PM
KoKo Dick -TaGal Loe Pay Mar lar?
Anonymous April 1, 2015 at 10:36 AM
mdyက ၃၅နစ် manlyတွေကို အမြဲလိုးချင်တယ်
Anonymous April 4, 2015 at 3:01 AM
ခံချင်​တယ်​ဗျာ viber ဆက်​သွယ်​ချင်​တယ်​
Anonymous April 5, 2015 at 6:20 AM
2573၄၆၅၈၇ vib night ဆက်​သွယ်​ပါ
aung kyawhtun April 6, 2015 at 8:32 PM
09797171743 မန်းလေးဒိတ်ချင်သူများ ဒိတ်လို့ရပါတယ်
09792000874 ကိုဆက်သွယ်ပါ top ပဲ အရပ်ပု
ပု ဝဝ ဝတဲ့လူမရပါ ရုပ်ကြည့်ကောင်းရမည် အရွယ်
ငယ်ငယ်ပိုကြိုက် ရန်ကုန်ကပါ လီးစံချိန်မှီတယ် နွှဲု